Dumarka Sacuudiga oo Bilaabay olole ay ku doonayaan in la joojiyo sharciga dumarka wakiilka laga yahay - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Dumarka Sacuudiga oo Bilaabay olole ay ku doonayaan in la joojiyo sharciga...
Dumarka kunool Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa bilaabay olole ay ku doonayaan in lagu joojiyo sharciga dhigaya in Dumarka kunool dalkaasi uu wakiil ka noqdo nin ehelkooda ah tilbaabo kasta ay qaadayaan.
In ka badan 14,000 oo dumar ah una dhashay Sacuudiga ayaa saxiixay baaq ku aadan la joojiyo in dumarka uu nin wakiil ka noqdo wax walbo ay sameenayaan, waxa ayna tilmaameen in arintaasi dumarka ku tahay xuriyad la’aan.
Dumarka Sacuudiga ayaa waajib waxaa ku ah in ay fasax ka heestaan nin wakiil ka ah marka ay shaqo raadsanayaan , waxbaranayaan ama marka ay safar galayaan, qofkii aan wakiil heysana waxba uma suurto galayaan.
Ololahan cusub ay bilaabeen Dumarka Sacuudiga ayaa hada ku xoogeestay baraha bulshada kuwada xariirto gaar ahaan Bogga Twitteka, waxaana la sameeyay haashtaag u gaar ah olalahan cusub ay wadaan dumarka Sacuudiga.
Mid kamid ah Haweenka u ololeenaya qorshahan dumarka xuriyada ku dalbanayaan oo lagu magacaabo Caziiza Al Yuusuf ayaa sheegtay in ay Dowlada u gudbiyeen codsigooda ayna dareemeyso farxad, waxa ayna tilmaantay in ay sugayaan jawaabta arintan laga siiyo.
Sharciga Sacuudiga yaala ayaa dhigaya Dumarka marka ay doonayaan in ay qaataan Baasaboor ama guursadaan iyo tilaabo kasta ay qaadayaan in la helo ogolaanshiyaha Aabahood, Walaalkood, ama raga qaba.
Dumarka ayaa sidoo kale looga baahan yahay wakiil looga noqdo goobaha shaqada, Jaamacadaha , marka ay guri kireesanayaan , dhaqtar aadayaan iyo marka ay sharci wax ku codsanayaan, dumarka ragooda dhinteen ayaa iyana waxaa wakiil ka noqonaya wiilashooda waa weyn.
Raga Wakiilka ah ayaana la sheegay in wax walbo ay gacantooda ku jirto ayna ka hor istaagi karaan Dumarka hadii ay u arkaan mid aan wanaagsaneyn, waana mida hada dumarka ku doonayaan in ay ka xuroobaan in wakiil laga noqdo.